PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - EKHISHINI:
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Izindaba -
* U-400g tin coconut milk * U-180ml kakwatapheya omeshiwe
* U-125ml woju, olokunandisa honey Shaya ndawonye izithako nge- food processor noma nge- blender.
Faka esitsheni esivaleka ngci bese ufriza kube amahora amane, ulokhu ushaya njalo emuva kwehora noma amabili ukuze kungabi no-ayisi.
Esikhundleni sokusebenzisa uju ungasebenzisa i- maple syrup
ikakhulu uma uyi- vegan.
Faka u-60ml we-supergreen powder noma i- matcha powder ukwengeza umsoco noma oluhlaza. Labo powder batholakala kuma- health shop.
Ngaphambi kokuba kudliwe yeka kuthi ukuthamba kancane kube imizuzu engu-20. * U-300g we-dark chocolate
* U-30g we-stork Bake margarine * Amaqanda amabili ashaywe kancane * Izipuni eziwu-3 ze-cognac noma amarula * Okumhlophe kwamaqanda okuwu-4 * Izipuni eziwu-6 ze-castor sugar
* U-500ml we-whipping cream
OKOKUHLOBISA I-whipped cream Ama-chocolate curl
Faka ushokoledi esitsheni esilungele uhhavini, usibeke phezu kwebhodwe elinamanzi abila kancane. Uyeke ushokoledi uze uthambe, ulokhu ugovuza.
Faka istork Bake majarini uqhubeke nokugovuza.
Yekela kuphole imizuzwana bese ufaka amaqanda ashayiwe notshwala obukhethile kulobu obubhalwe ngenhla.
Ngokusebenzisa i-electric mixer noma okokuphehla amaqanda, hlanganisa kahle izithako kuze kube sengathi kunegwebu bese ufaka noshukela.
Shaya okumhlophe kwamaqanda kube yikota ukufake kwingxube kashokoledi ukuze kuthambe.
Shaya ukhilimu kwingxube engenhla, thela engilazini noma esitsheni esifayo, wemboze bese ufaka efrijini kube amahora amane.
Hlobisa ngokhilimu oshayiwe nama-chocolate curls. * Ama-aphula awu-5 (granny smith apples) ahlutshiwe, akhishwa izinhlamvu, asikwa aba yizikwele ezingo-2cm. * U-250ml wama-raisins * U-125ml we-castor sugar * U-30ml we-lemon juice * U-5ml we-ground cinnamon
* U-375ml we-cake flour * U-180ml we-castor sugar * U-3ml we-ground cinnamon * U-250ml we-oats
* U-225g webhotela elincibilikisiwe
* I-vanilla ice cream noma i-custard, ozoyisebenzisa uma usuphaka Shisisa uhhavini ube ku-180 celsius. Gcobisa ngokusamafutha isitsha esilungele uhhavini. Hlanganisa ama-aphula, ama-raisins, ushukela, i-lemon juice ne-cinnamon esitsheni esigcotshiswe ngokusamafutha.
Ukwenza imvuthu: Hlanganisa ufulawa, ushukela, i-cinnamon, i-oats nebhotela kuze kube yizimvuthuluka. Vuvuzela kwingxube yamaaphula. Bhaka kube imizuzu engu-40 noma kuze kube umbala osagolide nama-aphula athambe. Kungadliwa no-ice cream noma ne-custard.
ISITHOMBE NGABE: IMG.TASTE.COM.AU ISITHOMBE NGABE: WOMENSHEALTH.COM.AU UMTHOMBO: YOURFAMILY ISITHOMBE NGABE: BAKINGMAD.COM UMTHOMBO:
KUTHATHA isikhathi esifushane ukwenza ichocolate Mousse kanti yehla esiphundu. ZIPHOLISE ekushiseni kwentwasahlobo ngo-ice kakwatapheya JABULISA umndeni wakho ngalesi sidlo, singaba yi-dessert noma kuphuzwe netiye.